နာတာရှည်မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုသည်မြင့်မားသော osFosB ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျိုးစပ်ကြွက်များနှင့်ကွဲပြားသောသောက်သုံးမှုပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (2012) - Your Brain On Porn
BMC neuroscience ။ 2012 Oct 29;13:130. doi: 10.1186/1471-2202-13-130.
Ozburn AR, Mayfield RD, Ponomarev ငါ, ဂျုံးစ်က TA, Blednov YA, Harris က RA.
အရက်များအတွက် Wagon ရေးစင်တာနဲ့ စှဲမွဲမှု သုတေသနအာရုံကြောသိပ္ပံ, Austin မှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ဘို့အင်စတီကျု, Austin, TX, 78712, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အရက်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်လက်ခဏာလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သောက်အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများဝတ္ထုအမူအကျင့်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇမော်ဒယ်များအပေါ်သုတေသနအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်ပေါ်မှာငါတို့အသိပညာဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ကြွက်နှစ်ခု F1 စပ်မျိုးကွဲနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကွဲပြားအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေကိုယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်: C57BL / 6J NZB / B1NJ x (BxN) ပြပွဲမြင့်မားသောအရက်၏ပြင်းအားနှင့် abstinence ၏ကာလနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအပြီးအရက် preference ကိုလျှော့ချ C57BL / 6J (FVB / NJ x စဉ်BxF) စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြသပါ။ ဤအ hybrids တွေကိုတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုမှီခိုထုံးစံ၌အီသနောစားသုံးမှုအတွက်မျိုးဗီဇအပိုဆောင်း (BxN) ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့် overdominance (BxF) ကိုသရုပ်ပြကြောင့်ဤ phenotypes စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။
အထူးသ BxF ပြပွဲမြင့်သောအီသနောပြင်းအားနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအပြီးအရက် preference ကိုလျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုနှင့် BxN ပြပွဲထော; သို့သော်အနိမ့်အီသနောပြင်းအားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံး hybrids တွေကိုအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုထုတ်လုပ်.
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကဤ phenotypes ဆုလာဘ်, မနှစ်သက်မှုနှင့်ဖိစီး related ဦးနှောက်ဒေသများ၌, သွေးဆောင်ကူးယူအချက်, ΔFosB၏ differential ကိုထုတ်လုပ်မှုကကိုယ်စားပြုသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အာရုံခံ plasticity အတွက်အပြောင်းအလဲများ (ΔFosBအဆင့်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) နောက်ထပ်အာရုံခံ circuitry အီသနောစားသုံးမှုစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အခြေခံကြောင်း supporting, အတွေ့အကြုံမှီခိုအဖြစ်ဦးနှောက်ဒေသနှင့် genotype တိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်.
လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုပြ BxN ကြွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြကြွက်တွေထက် Edinger-Westphal နျူကလိယထဲမှာအနိမ့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကအလယ်ပိုင်း medial amygdala အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုဖေါ်ပြခြင်း BxN ကြွက်, အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ပိုမိုမြင့်မားΔFosBအဆင့်ဆင့်ပြသ Edinger-Westphal နျူကလိယနှင့် amygdala (ဗဟိုနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကွဲပြားမှု) ။
ထို့ပြင်အတွက် အဆိုပါ Edinger-Westphal နျူကလိယအတွက် BxN ကြွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်သိသိသာသာအပြုသဘောအီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်း ventral tegmental ဒေသများ။ ထို့အပြင် hierarchical Cluster ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြုံငုံမြင့်မားသောΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြသများစွာကိုကြွက်အတူတူနေတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်၌ရှိကြ၏သော်လည်းအလုံးစုံအနိမ့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအများအပြားအီသနော-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်တစ်စပျစ်သီးပြွတ်၌နေသောဖော်ပြခဲ့တယ်။
နှစ်ခုအရက် phenotypes နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ခြားနားခြင်းအားဖြင့်, ဒီလေ့လာမှုကို (Edinger-Westphal နျူကလိယ, ventral tegmental ဧရိယာ, amygdala တို့အပါအဝင်) ကို reward- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဆားကစ်လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုအဖြစ်တငျပွကြောင်းသိသာ plasticity ခံယူကြောင်းပြသသည်။
အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်နှင့်ဆက်နွယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇလူသိများလွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ, ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီမှနည်းနည်းအကျိုးဆက်နှင့်အတူအရက်၏ copious ပမာဏသောက်စွမ်းရည်အရက်တုန့်ပြန်တဲ့အနိမ့်အဆင့်ကိုအရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအားနည်းချက်အချက်ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, များစွာသောအရက်သမားတစ်ဦးမူလတန်းစတင်ခြင်းလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည် [1,2] ။ အရက်ဖြည့်ညှင်းမှပံ့ပိုး neurobiological အချက်များ defining အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကူညီခြင်း, အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအဘို့တိုးတက်ကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်ပါလိမ့်မယ်။ လူ့ရောဂါတုပဖို့ကြွက်မော်ဒယ်များအသုံးပြုခြင်းဒီရောဂါကိုနားလည်နှင့်ကုသတိုးတက်အောင်၏တိုးအတွက်အစွမ်းထက် tool ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အများအပြားကြွက်မော်ဒယ်များသို့သော်အဘယ်သူအားမျှမော်ဒယ်အရက်လုံးဝ, အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်၏ရှုထောင့်လေ့လာရရှိပါတယ်. အတိုင်းအတာတစ်ခု mouse ကိုနှုတ်အလားတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီသနောဖြေရှင်းချက် [ယင်း၏မျိုးရိုးဗီဇနောက်ခံအပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ရန်3].
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့အမျိုးသမီး 57-6 g / ကီလိုဂရမ် / နေ့လောင် (C57BL / 6JxFVB / NJ (BxF) ထိုနှင့် FVB / NJxC6BL / 1J (FVBxB20) F35 စပ်ကြွက်နှစ်ပုလင်း preference ကိုစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းအရက်၏ထူးထူးခြားခြားမြင့်မား Self-စီမံခန့်ခွဲတွေ့ရှိခဲ့ နှင့်) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပါရာဒိုင်းပေါ် မူတည်. 7-25 g / ကီလိုဂရမ် / နေ့ကူထီး  ။ သွေးအရက်ပါဝင်မှုနှုန်းတစ်ခု overdominant phenotype နှင့်သောက်သုံးရေ၏သက်သေအထောက်အထားများအပါအဝင်တည်ဆဲ inbred မျိုးကွဲ, နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါဒီသစ်ကိုမျိုးဗီဇမော်ဒယ် [သိသိသာသာအားသာချက်ရှိပါတယ်4] ။ ထို့အပြင် BxF ကြွက်အားဖြင့်ပြမြင့်အီသနောစားသုံးမှု [နှစ်ခုအပိုဆောင်းအီသနောအရက်သောက် Paradigm (စီစဉ်ထားအရည် access ကိုစဉ်အတွင်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်အီသနောလက်ခံမှု၌သောက်) တွင်တွေ့မြင်နေသည်4] ။ ကြွက်နှစ်ခု F1 စပ်မျိုးကွဲနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ထို့နောက်ကွဲပြားအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိ: abstinence နှင့် BxF ပြပွဲ၏အရက်နှင့်ကာလကိုမြင့်မားပြင်းအားနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအရက် preference ကိုထောကျပြီးနောက် C57BL / 6J NZB / B1NJ (BxN) ပြပွဲသို့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကို x . အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ BxN အီသနောဒဆန္ဒရှိနှင့်သက်သာစေသောဆေး, ဒါပေမယ့်အကြိုးမပေး, သက်ရောက်မှုမှ BxF ကြွက်တွေထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသကြ .
သောက်သုံးရေအတွက်အခြေခံပညာမြင့်မားတဲ့အရက်သုံးစွဲမှု၏ဝတ္ထုအမူအကျင့်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇမော်ဒယ်များအပေါ်သုတေသနနှင့်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်ပေါ်မှာငါတို့အသိပညာဆက်ပါလိမ့်မယ်။ BxN ကြွက်စပိုင်းတွင်အီသနောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမြင့်မားသောဦးစားပေးပြသနေသောကြောင့်အဆိုပါလျှော့ချအရက်သေစာ preference ကို phenotype စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအီသနောပြင်းအားနှင့် abstinence နှင့်အတူအတှေ့အကွုံအပြီးအရက်စားသုံးမှုလျှော့ချများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်မသိသောတတ်သော်လည်း, BxN ကြွက်သောအရက်သောက်အလယ်အလတ်နှိုငျးယှဉျစေခြင်းငှါသူတို့နေဆဲအနေနဲ့ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံကိုကြောင့်ယူဆရ, အီသနောဖြေရှင်းချက်လောင်ပေမယ့်တစ်ဦးလျှော့အဆင့်မှာ။
BxF ကြွက် stably မသက်ဆိုင်ယခင်အတွေ့အကြုံ၏အီသနော၏အလွန်အမင်းမြင့်မားလောင်အဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုမော်ဒယ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်အရက် preference ကိုလျှော့ချထားတဲ့အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြပွဲသိသိသာသာအတင်းအဓမ္မ abstinenc တဲ့ကာလပြီးနောက်အရက်သောက်တိုးပွားလာတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းအီး  ။ အဆိုပါအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာအရက်သေစာသောက်သုံးအပြုအမူလေ့လာနေများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်သိစမ်းသပ်အချိန်ဇယားကိုဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အချိန်ဇယားထက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသော်လည်းတစ်ဦးအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအရက်သုတေသနကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်အရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်မှကဒီမှာဆွေးနွေးကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့် phenotypes ပြောပြတယ်။ လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုတစ်ဦးအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကို၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားရှုပ်ထွေး interaction ကထဲကပေါ်ထွန်းဖို့စဉ်းစားနေကြစဉ်ကတည်းကထိုကဲ့သို့ BxF နှင့် BxN အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမျိုးရိုးဗီဇတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အသုံးပြုမှု, လယ်၌ဖြစ်သောတိုးဖို့ကိုအလွန်စေတယ်။ ဤအ hybrids တွေကိုအဘို့အ differential ကိုချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇထုတ်ဖော် identification အီသနော၏အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အရေးကြီးသောဦးနှောက် circuitry သို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပေးထားပါတယ်။
အီသနောနှင့်အခြားမူးယစ်စေ့စပ် neurocircuits အာရုံခံ plasticity နှင့် / သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၏မော်လီကျူးအမှတ်အသားများကို အသုံးပြု. တိကျတဲ့ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာခဲ့ကြပြီ [8-15] ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအီသနောနှင့်ညီမျှဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်မြေပုံဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, တိကျတဲ့ circuitry အကြံပြုခြင်းအီသနော၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအခြေခံ [8,9].
သေးကျယ်ကျယ်အရက်သေစာသုတေသနအတွက်စူးစမ်းခံရဖို့တစ်ခုမှာ key ကို component တစ်ခု, စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုအပြုအမူတွေနှင့်ဤအပြုအမူစဉ်အတွင်းစေ့စပ်အာရုံခံဆားကစ်၏ဖော်ထုတ်ခြင်း၏စာမေးပွဲသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏ရည်မှန်းချက်စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုအားဖြင့်စေ့စပ်ဦးနှောက်ဒေသများခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ (အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ) နာတာရှည်အရက်အုပ်ချုပ်ရေးΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက်ဦးနှောက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေပြသခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ကျွန်တော်သိဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဤအပြုအမူ phenotypes အဆိုပါသွေးဆောင်ကူးယူအချက်, ΔFosB၏ differential ကိုထုတ်လုပ်မှုကကိုယ်စားပြုသောအယူအဆစမ်းသပ်ပြီး ဆုလာဘ်, မနှစ်သက်မှုနှင့်ဖိစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည် .
ΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေကြောင်းနာတာရှည်လှုံ့ဆော်မှု [အလွဲသုံးစားမှု (အရက်, ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် antipsychotics) ၏မူးယစ်ဆေးဝါး, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု, ခန့်မှန်းရခက်ခြေမထိတ်လန့်, electroconvulsive သိမ်းယူမှု), နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဘီး running ပါဝင်သည်11] ။ ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တစ်အလားအလာဖျန်ဖြေအဖြစ်, နာတာရှည်အီသနောကုသမှုတုံ့ပြန် FosB (FosB သို့မဟုတ်ΔFosB) ၏လွှမ်းမိုးမူကွဲဖော်ထုတ်အရေးပါသောဂုဏ်ထူးဖြစ်ပါတယ်။
ကΔFosB (ထိုကဲ့သို့သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့သည်အဖြစ်) ကိုလွှမ်းမိုး isoform ခဲ့ကြောင်းစိစစ်ရသေးပါသောနာတာရှည်လှုံ့ဆော်မှုပြီးနောက် FosB နှင့်ΔFosBတိုင်းတာကြောင့်အများအပြားလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ သို့သော်ΔFosBမဟုတ်ဘဲ FosB [နာတာရှည်လှုံ့ဆော်မှုပြီးနောက်ကြီးစိုး isoform ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်10-12] ။ Ryabinin နှင့်ဝမ် (1998) ကလေ့လာမှုတစ်ခုအနိမ့်အရက်ထဲမှာ DBA / 2J ကြွက်ပိုနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောထိုးလေးရက်ပေါင်းအောက်ပါဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB စကားရပ်ထဲမှာအားကောင်းတဲ့တိုးအတွက်ရလဒ်: anterior cortical amygdaloid နျူကလိယ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum ventrale အလယ်ပိုင်း amygdala , နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, နျူကလိယ [shell ကို, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကို၎င်း, thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ accumbens13] ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုအနေနဲ့အီသနော-တုံ့ပြန်မှု neurocircuit ခွဲခြားသတ်မှတ်။ FosB စကားရပ်ကိုလည်းကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစဉ်အတွင်း C57BL / 6J mouse ကို သာ. နှစ်သက်မြင့်အရက်ထဲမှာတိုင်းတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူစဉ်အတွင်း FosB အဆင့်ဆင့်မအပြောင်းအလဲများ [ရှိခဲ့သည်14]. သို့သော်ကန့်သတ် access ကိုအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ပတ်အတွင်းအပြီး, FosB အဆင့်ဆင့် [သည့် amygdala နှင့် Edinger-Westphal နျူကလိယ၏ဗဟို medial နျူကလိယတိုးမြှင်ခဲ့ကြသည်15]. ယေဘုယျအားအစီရင်ခံစာများ [အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စေ့စပ်ဝတ္ထုဒေသများတွင်ဖော်ထုတ်ရန်, အဖြစ် mesocorticolimbic လမ်းကြောင်းများနှင့်တိုးချဲ့ amygdala များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ ဆက်စပ်. အ16] ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ [ΔFosBအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲအီသနောအုပ်ချုပ်ရေး, ဆေးထိုးခြင်း, တစ်ဦးကိုကုသသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကိုထိတွေ့အချိန်အရှည်၏လမ်းကြောင်းအပေါ်မူတည်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်13-15].
ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့မောက်မျိုးကွဲစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုဤကွဲပြားအရက်တုံ့ပြန်မှုတာဝန်ရှိသည်အခြေခံယန္တရား၏နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့မော်ဒယ်များပေး။ ဒီလေ့လာမှုကလျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုပြကြွက်လည်း (ထို Edinger-Westphal နျူကလိယ, ventral tegmental ဧရိယာ, amygdala, နျူကလိယ accumbens နှင့် cingulate cortex အပါအဝင်) reward- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဆားကစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသော plasticity ပြသသောပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
BxF နှင့် BxN ကြွက်တွေမှာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အရက်ပြင်းအားများနှင့် abstinence ကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကွဲပြားအီသနောပြင်းအားနှင့် / သို့မဟုတ် abstinence ကာလနောက်ပိုင်းအီသနောစားသုံးမှုကိုပြောင်းလဲကွောငျးတငျပွဖို့ကျနော်တို့အီသနောစားသုံးမှုတိုင်းတာရန်လေးအချိန်ဇယား (အုပ်စုများ) ဒီဇိုင်း (ပုံ (Figure1a, ခ) ။1တစ်ဦး, ခ) ။ လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများအသီးအသီးမျိုးစပ်အဘို့အရှိခဲ့သည်: Abstinence ကာလနှင့်အတူ Abstinence အချိန်ကာလများ, အနိမျ့စူးစိုက်မှု, နှင့်အနိမျ့ပြင်းအားနှင့်အတူမြင့်မားစူးစိုက်မှု, အမြင့်ပြင်းအား။ အီသနော preference ကို (ပုံများအတွက် complete ဒေတာ (Figure2)2) နှင့်စားသုံးမှု (ပုံ (Figure3)3အားလုံးအုပ်စုများနှင့်နှစ်ဦးစလုံး genotype) များအတွက်) ဒေတာ (ကိုးကားတင်ပြနေကြပါတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်လျှော့အရက် preference ကို၏အမူအကျင့် phenotypes တည်ထောင်ရန်နှင့်သရုပျဖျောဖို့, 9% အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုဒေတာကိန်းဂဏန်းများအတွက်တင်ပြထားပါသည် Figures44 နှင့် and5 ။5။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့် phenotypes ဟာမြင့်မားစွာအုပ်စုများအတွက်ပထမ, ဒုတိယ, တတိယနှင့်စတုတ္ထတင်ဆက်မှုထံမှ 9% အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ်ပေါ်တွင်အခြေခံနှင့်အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုများအတွက်စမ်းသပ်ရက်ပေါင်းသက်ဆိုင်ရာနေကြသည်။ 9% အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှု ANOVA (genotype x ကိုအချိန်) ဖျော်ဖြေခဲ့သည်တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုလမ်း။ အဆိုပါအမြင့်ပြင်းအားအုပ်စု, အီသနော preference ကို (ပုံများအတွက် (Figure4a)4တစ်ဦး) နှင့်စားသုံးမှု (ပုံ (Figure5a)5က) BxN ထက် BxF အတွက်ပိုကြီးပြီး BxN သည်အရက် preference နှင့်စားသုံးမှု (ETHANOL PREFERENCE - interaction က F (3,54) = 4.83, P <0. 01, genotype F) ပြစဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference နှင့်စားသုံးမှုပြသခဲ့သည် 1,54) = 24.10, P <0.001, အချိန်က F (3,54) = 9.92, P ကို ​​<0.0001; ETHANOL စားသုံးမှု - အပြန်အလှန် N / S, genotype က F (1,54) = 50.73, P <0.0001, အချိန်က F (3,54, 11.68) 0.0001, P ကို ​​<XNUMX) = ။ astinence နှင့်မြင့်မားသော Concentrations အုပ်စုအတွက်, အီသနော preference ကို (ပုံ (Figure4b)4ခ) နှင့်စားသုံးမှု (ပုံ (Figure5b)5ခ) BxN သည် BxF ထက် ပို၍ ကြီးသည်၊ BxN သည်အရက်၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်စားသုံးမှု (ETHANOL PREFERENCE - အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု - F (3,132) = 15.89, P <0.0001, genotype F (1,132) = 250.43, P) စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်နှင့်စားသုံးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ <0.0001, အချိန်က F (3,132) = 27.48, P <0.0001; ETHANOL စားသုံးမှု - အပြန်အလှန်က F (3,132) = 11.35, P <0.0001, genotype F ကို (1,132) = 510.88, P <0.0001, အချိန်က F (3,132) = 22.42, : P <0.0001) ။ အနိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှုအုပ်စုအဘို့, အီသနော preference ကို (ပုံ (Figure4c)4က c) နှင့်စားသုံးမှု (ပုံ (Figure5c)5ဂ) BxF ထက် BxF အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြင် hybrids နှစ်မျိုးလုံးသည်အရက် preference နှင့်သုံးစွဲမှုကိုပြသခဲ့သည် (ETHANOL PREFERENCE - အပြန်အလှန် N / S၊ genotype F (1,54) = 12.2, P <0.01, time N / S; ETHANOL စားသုံးမှု - အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု) N / S, genotype က F (1,54) = 74.83, P ကို ​​<0.0001, အချိန် N ကို / S) ။ abstinence နှင့်အတူအနိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှုအုပ်စုသည်, အီသနော preference ကို (ပုံ (Figure4d)4ဃ) နှင့်စားသုံးမှု (ပုံ (Figure5d)5) BxF ထက် BxF အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြင် hybrids နှစ်မျိုးလုံးသည်အရက်ကြိုက်မှုနှင့်စားသုံးမှု (ETHANOL PREFERENCE - အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ genotype F (1,132) = 166.58, P <0.0001, time N / S) ကိုသိသိသာသာလျှော့ချကြောင်းပြသသည်။ F ကို (3,132) = 3.61, P ကို ​​<0.05, genotype က F (1,132) = 480.64, P ကို ​​<0.0001, အချိန်က F (3,132) = 7.87, P ကို ​​<0.0001) ။ အချုပ်အားဖြင့် (abstinence မပါဘဲ) အမြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအုပ်စုများအတွက် BxF စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြစဉ် BxN လျှော့ချအရက် preference ကိုပြနှင့် (abstinence မပါဘဲ) အနိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှုအုပ်စုများအတွက်, BxF နှင့် B6xN နှစ် ဦး စလုံးစဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြ။ အကျိုးစီးပွား၏ phenotypes အကောင်းဆုံးကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းမရှိဘဲအုပ်စုများအတွက်ဖမ်းဆီးရမိနေကြသည်ကတည်းကသူတို့လေ့လာမှု၏ကျန်ရှိသော၏အာရုံစိုက်ဖြစ်ကြသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုများအတွက်စမ်းသပ်အချိန်ဇယား။ a။ အနိမျ့ပြင်းအားနှင့်မြင့်မားသောပြင်းအားအုပ်စုများအတွက်စမ်းသပ်အချိန်ဇယား။ b။ Abstinence ကာလနှင့်မြင့်မားသောပြင်းအားနှင့်အတူအနိမျ့ပြင်းအားအဘို့စမ်းသပ်အချိန်ဇယား ...
အီသနော preference ကို genotype နှင့်အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်မှီခိုသည်။ a။ အဆိုပါအမြင့်ပြင်းအားအုပ်စုများအတွက်, အီသနော preference ကို (အီသနောစားသုံးမှု / စုစုပေါင်းအရည်စားသုံးမှု) BxN ထက် BxF အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။b...
အီသနောစားသုံးမှု genotype နှင့်အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်မှီခိုသည်။ a။ အဆိုပါအမြင့်ပြင်းအားအုပ်စုများအတွက်, အီသနောစားသုံးမှု (ဆ / ကီလိုဂရမ် / နေ့သန့်စင်သောအီသနော) BxN ထက် BxF အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ b။ အဆိုပါအမြင့်ပြင်းအားခုနှစ်တွင် ...
ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်လျှော့အရက် preference ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာ phenotypes ။ ယင်းပထမ, ဒုတိယ, တတိယနှင့်စတုတ္ထတင်ဆက်မှုထံမှ 9% အီသနော preference ကိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကို၏အမူအကျင့် phenotypes တည်ထောင်ရန်ပြနေကြသည်။ a. ...
ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်လျှော့ချအရက်သောက်အပြုအမူ phenotypes ။ ပထမဦးဆုံး, ဒုတိယ, တတိယနှင့်စတုတ္ထတင်ဆက်မှုထံမှ 9% အီသနောစားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်လျှော့ချအရက်သောက်များ၏အမူအကျင့် phenotypes တည်ထောင်ရန်ပြနေကြသည်။ ...
ΔFosBအရေအတွက်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနာတာရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုစဉ်အတွင်း activated neurocircuitry သိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ သုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများအသီးအသီးမျိုးစပ်အဘို့အရှိခဲ့သည်: အမြင့်စူးစိုက်မှု, အနိမျ့စူးစိုက်မှု, နှင့်ရေ (ထိန်းချုပ်ရေး) ။ ΔFosB data တွေကိုရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံ [(ΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံ၏ #) / (ΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံ၏ # + Nissl အပြုသဘောအာရုံခံ၏ #)] (စားပွဲတင်အဖြစ်တင်ပြထားပါသည် (Table1) ။1) ။ ယခင်အလုပ် [အီသနောအတွေ့အကြုံကို neurodegeneration သွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုပြတော်မူပြီ17] ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤလေ့လာမှုတွင် neuron နံပါတ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်ဤလေ့လာမှုမှာ quantified ဦးနှောက်ဒေသများများအတွက် genotype သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုအပေါ်အခြေခံပြီးမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်သတင်းပို့ပါ။ တစ်ဦးချင်းစီ genotype များအတွက် 1) သုံးလမ်း ANOVA (genotype x ကိုအုပ်စုတစ်စုက x ဦးနှောက်ဒေသ), 2) နှစ်ခုလမ်း ANOVA (ဦးနှောက်ဒေသက x အုပ်စုသည်), နှင့် 3) ဆက်စပ်မှုမက်တရစ်ဆက်စပ်မှု map မှတီထွင်ခဲ့ကြသည်: ΔFosBအချက်အလက်များ၏အောက်ပါသုံးခုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြ ကွန်ရက်များ။
ထပ်ခါတလဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များသုံးလမ်း ANOVA (genotype x group x ဦး နှောက်ဒေသ) ကမျိုးရိုးဗီဇ x ဦး နှောက်ဒေသအပြန်အလှန် [F (15,375) = 2.01, P <.05] အုပ်စုတစ်စုက ဦး နှောက်ဒေသအပြန်အလှန် [F (15.375) = 1.99, P ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို <0.01] နှင့် ဦး နှောက်ဒေသ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု [F ကို (15,375) = 43.36, P ကို ​​<.000] ။ တစ်ခုချင်းစီကို genotype များအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံနှစ်လမ်း ANOVA (ဦး နှောက်ဒေသက x အုပ်စု) BxF နှင့် BxN နှစ် ဦး စလုံးအတှကျအုပ်စုနှင့် ဦး နှောက်ဒေသ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးဖျောပွ [BxF - F (2,374) = 11.79, P <.0001 ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု အုပ်စု F ကို (15,374) = 25.64, P ကို ​​<.0001, ဦး နှောက်ဒေသ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု; BxN - F ကို (2,360) = 43.38, P ကို ​​<.0001, အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု; F ကို (15,360) = 23.73, P ကို ​​<.0001, genotype ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု] ။ Post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက BxN အတွက်အုပ်စုခွဲခြားမှုခြောက်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (Figure6a-က c) ။6AC) ။ ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအဆင့်ဆင့်, La, CEC / CeL, EW နှင့် VTA အတွက်ရေအုပ်စုထက်နိမ့်ပြင်းအားအုပ်စုတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosB CeMPV အတွက်ရေအုပ်စုထက်အမြင့်ပြင်းအားအုပ်စုတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosB EW အတွက်မြင့်မားသောပြင်းအားအုပ်စုထက်အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ quantified ရှိသမျှသည်အခြားသောဦးနှောက်ဒေသများများအတွက်ΔFosBဒေတာစားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည် Table1 ။1။ ပေးထားသော ဦး နှောက်ဒေသရှိ osFosB အပြုသဘောအာရုံခံဆဲလ်များ၏အီသနောစားသုံးမှုသို့မဟုတ် ဦး စားပေးမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် Pearson ၏ r ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အီသနောစားသုံးမှုနှင့် ဦး စားပေး BxN ကြွက်များ၏ EW နှင့် VTA% ΔFosBနှင့်အတူသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသ (ETHANOL စားသုံးမှု - EW r ကို = 0.85; VTA r = 0.85; ETHANOL PREFERENCE - EW r ကို = 0.83, VTA r = 0.88; p <0.05) အားလုံးအတွက်)။
ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခြင်းနှင့်လျှော့အရက် preference ကိုပု amygdala အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်, EW နှင့် VTA ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဒေသများတွင်ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံ (a။ ), EW (b။ ) နှင့် VTA (c။ ) ။ d။ နှင့် e။ ΔFosB / Nissl အစွန်းအထင်းများကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ ...
ΔFosBစကားရပ်, genotype, ဦးနှောက်ဒေသနှင့်အီသနောစားသုံးမှုတို့တွင်ရှုပ်ထွေးကြားဆက်ဆံရေးထပ်မံနိယာမအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် hierarchical Cluster သုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့သည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေတာအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏အများစု (~ 80%)5အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုယ်စားပြုခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ (တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဦးနှောက်ဒေသများအားဖြင့်ပြွတ်) Unsupervised hierarchical Cluster ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်း (ပုံကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည် (Figure7) ။7) ။ တစ်ဦးချင်းစီပြွတ်မသက်ဆိုင် genotype ၏, အီသနောစားသုံးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအာဆီယံရဲ့၏, သန်မာပေမယ့်မစုံလငျပုံစံများဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယင်းအီသနော-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်၏အတော်များများကအတူတကွပြွတ်နှင့်ယုတ်ထက်ခြုံငုံΔFosBလျော့နည်းခြင်းနှင့်အတူတူပြွတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြသနှင့်ယုတ်ထက်ပိုမိုခြုံငုံΔFosBပြသောကြွက်အများအပြားပြသ။ အဲဒီနှစျခုပြွတ်အရှိဆုံးမတူကွဲပြားခဲ့ကြသည်။ အကြား၌အသုံးပြွတ်ထက်လျော့နည်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသူကိုယ်စားပြုနှင့်ΔFosBတန်ဖိုးများနှင့်အီသနောအရက်သောက် phenotypes ၏ရောနှောဆိုလို။
ΔFosBအဆင့်ဆင့်တစ်ဦးတည်းအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်ကြသည်မဟုတ်။ hierarchical Cluster ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းΔFosBအဆင့်ဆင့်၏ရရှိလာတဲ့အပူမြေပုံနှင့်သက်ဆိုင်ရာ 9% အီသနောစားသုံးမှုပြနေကြသည်။ အစိမ်းရောင် = ΔFosBထက်နည်း ...
ကြွက်နှစ်ခု F1 စပ်မျိုးကွဲနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကွဲပြားအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်: BxF ပြပွဲအရက် preference ကိုထောကျနေစဉ် BxN ပြပွဲမြင့်မားသောအရက်၏ပြင်းအားနှင့် abstinence ၏ကာလနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအပြီးအရက် preference ကိုလျှော့ချ. BxF မော်ဒယ်များတည်ငြိမ်မြင့်မားစားသုံးမှု (စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကို) နှင့် BxN မော်ဒယ်များ (လျော့ချအရက်သေစာ preference ကို) သောက်သုံးအလယ်အလတ်။ (ΔFosBအဆင့်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှု,) အာရုံခံ plasticity ထပ်မံစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုအတွက်တိကျတဲ့အာရုံခံ circuitry တစ်ခုနောက်ခံအခန်းကဏ္ဍ supporting, အီသနောအတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
strain စားသုံးမြင့်အရက်အဘို့, C57BL / 6, အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှု [ကနဦးအီသနောအာရုံစူးစိုက်မှု, abstinence ၏အရှည်နှင့် sub-strain (C57BL / 6Cr သို့မဟုတ် C57BL / 6J) အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုနေကြ7,18] ။ ကျနော်တို့ BxF ကြွက်များ၌တွေ့မြင်အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုစမ်းသပ်ပြီးလေးပါးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားထဲမှာ (BxN အတွက်ထက်များနှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်) တသမတ်တည်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုအတွက်လျှော့ချစမ်းသပ်ပြီးရှိသမျှသည်အခြားသောနာတာရှည်အရက်သောက်အချိန်ဇယားနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြစဉ် BxN အတွက်အတန်အသင့်မြင့်မားသောအီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုသာ, နာတာရှည်သောက်သုံးရေ (abstinence မပါဘဲအနိမျ့ပြင်းအား) ၏တဦးတည်းအချိန်ဇယားနှင့်အတူကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။ BxN အရက် preference ကိုသိသိသာသာယခင်ကအလွန်အမင်းနှစ်သက်အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုမှသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသောအတှေ့အကွုံ (မျိုးစုံကိုမြင့်သောအီသနောပြင်းအားနှင့် / သို့မဟုတ် abstinence အတော်ကြာတိုတောင်းသောကာလနှင့်အတူအတှေ့အကွုံပြီးနောက်အီသနော၏ထပ်ခါတလဲလဲတင်ဆက်မှု) တွင်တစ်ဦးဝတ္ထုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကမ်းလှမ်းလျှော့ချ။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအီသနောတိကျသော circuitry အီသနော၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအခြေခံအကြံပြုခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်မြေပုံများအားထုတ်လုပ် [8,9] ။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာ phenotypes ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဒေသများ, မနှစ်သက်မှုနှင့်ဖိစီးထဲမှာ, သွေးဆောင်ကူးယူအချက်, ΔFosB၏ differential ကိုထုတ်လုပ်မှုကကိုယ်စားပြုသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ΔFosBထူးခြားတဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ကူးယူအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အက c-Fos သကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုမှ desensitize ပါဘူး, အစားကနာတာရှည်ကုသနေစဉ်အတွင်းစုဆောင်း။ ΔFosBအတွက်တိုးတိုးမြှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ကြပြီးကြာရှည်ခံအာရုံခံ plasticity ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံများ၏ရာခိုင်နှုန်းက genotype (BxF နှင့် BxN) နှင့်အုပ်စုသည် (ရေထိန်းချုပ်မှု, အနိမျ့စူးစိုက်မှု, နှင့်မြင့်မားသောပြင်းအား) ပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Fဦးနှောက်အီသနောပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဒေသများ, ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးမြှင့်အာရုံခံ plasticity ညွှန်း: သို့မဟုတ် BxN, Post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုဟာ EW နျူကလိယ, VTA နှင့် amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ΔFosBအတွက်ရလဒ်ကဖော်ပြတယ်။ အဆိုပါအမြင့်ပြင်းအားအုပ်စုတစ်စု (သို့လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကို) တွင် BxN ကြွက်ကဤအာရုံခံအနေနဲ့အတွေ့အကြုံကို-မှီခို plasticity နှင့်အတူအရက်စားသုံးမှုတုံ့ပြန်ကြောင်းအကြံပြုသည် EW အတွက်အာရုံခံ plasticity လျှော့ချပါပြီ။ အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုသည် (ပြစဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကို) ခုနှစ်, EW အတွက်အာရုံခံ plasticity ဟာမြင့်မားစွာနဲ့ရေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအီသနောအရက်သောက် Paradigm နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ mouse ကိုမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း, BxN ကြွက်များ၏ EW ၌အကြှနျုပျတို့၏တွေ့ရှိချက်များ [ယခင်အီသနောစားသုံးမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူ14,15] ။ non-preganglionic EW မကြာသေးမီကအာရုံခံ -containing်perioculomotor urocortin (Ucn) အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားပြီး  ။ Ucn1 CRF1 နှင့် CRF2 receptors ချည်နှောင်ကြောင်း peptide -like အချက် (CRF) လွှတ်တဲ့ corticotropin ဖြစ်ပါတယ်။ , မျိုးဗီဇ pharmacological နှင့်တွေ့ရှိရပါသည်ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ယခင်လေ့လာမှုများ [Ucn1 အရက်သောက်ထိန်းညှိအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြသကြ19-22] ။ T ကဤနေရာတွင်မြင့်မားသောအရက်စားသုံးမှုများအတွက်လူသိများမျိုးဗီဇ EW နှင့် LSi အတွက် Ucn1 မြင့်မား Basal အဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းကြွက်များတွင်ဖြစ်ပါသည်  ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အမြင့်ဆုံးအရက် BxF ကြွက် သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်စားသုံးဘို့ EW အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသောမရှိခြင်း Post-hoc ၏အရေးပါမှုကိုမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီ BxN ရေအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် BxF ရေအုပ်စုတွင်အနည်းငယ်တိုးမြှင်ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအဆင့်ဆင့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုပြအားလုံးကြွက်များအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအဆင့်ဆင့် (BxF မြင့်မားစွာအုပ်စု BxF အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုနှင့် BxN အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုကို) အတော်လေးဆင်တူဖြစ်ကြသည်။
BxN အဘို့, အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုတွင်အီသနောစားသုံးမှုဟာ VTA (အမြင့်မားစွာနဲ့ရေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်) တွင်အာရုံခံ plasticity တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုလည်းအနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စု သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြ။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အရက် BxF ကြွက် သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်စားသုံးဘို့ VTA အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသောမရှိခြင်း Post-hoc ၏အရေးပါမှုကိုမမျှော်လင့်ဘဲနှင့်ကြောင့်ရေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုΔFosB၏အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မား Basal အဆင့်ဆင့်မှဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအဆင့်ဆင့်ထောက်အရက် preference ကို (BxF မြင့်မားစွာအုပ်စု BxF အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုနှင့် BxN အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုကို) ပြအားလုံးကြွက်ဘို့အတော်လေးဆင်တူသော်လည်းရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအဆင့်ဆင့်အနည်းငယ်, BxN ရေအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် BxF ရေအုပ်စုသို့ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ ။ အဆိုပါ VTA dopamine system ကို [အီသနော၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍနှင့်အီသနောနှင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေများအတွက်အရေးကြီးသောအများအပြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ပါဝင်24-26] ။ ထို့အပြင်ထို amygdala မှ VTA စီမံကိန်းများနှင့် EW နျူကလိယ။ ကြွက် [တိုက်ရိုက် VTA သို့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီသနောပြခဲ့ကြ27]. ဒါ့အပြင်အီသနောထိတွေ့ [VTA အတွက် dopaminergic အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေ28,29] ။ တိုးမြှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကျနော်တို့ BxN အတွက်နာတာရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိသော VTA အတွက်ΔFosBသော induction ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အရက်မှီခိုအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရေရှည် neuroadaptations induces; အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်အတွက်အရေးပါသောယန္တရားဟာ amygdala အတွင်းအချက်ပြ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ဖြစ်ပါသည်  ။ အဆိုပါ CeA အတွက်အာရုံခံ၏ Pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး [ဂါဘမြို့သား, CRF, opioid, serotonin, dynorphin နှင့် norepinephrine receptors ပစ်မှတ်ထားပါပြီ25,31-34] ။ , GABA ရန်အဖြစ် CRF ရန်, အီသနောစားသုံးမှုလျော့ [32,33,35]. အဆိုပါ CeA ၏တွေ့ရှိရပါသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုလျော့ . ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းအရက်သောက်သုံးအပြုအမူအတွက် CeA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ ဗဟို amygdala အတွက် GABAergic အာရုံခံအဘယ်သူ၏ဆက်သွယ်မှုသူတို့ရဲ့ peptide အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောပေါ်လာတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလူဦးရေဖွဲ့စည်းရန်။ ဤရွေ့ကား GABAergic အာရုံခံအဆိုပါ CeA ၏ output ကိုလှုပ်ရှားမှုပေါင်းစပ်။ အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ် [Wee နှင့် Koob (2010]), s ကိုအစဉ်အဆက်လေ့လာမှုများအီသနောစားသုံးမှု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်တင်းမာမှုအတွက် dynorphin နှင့် Kappa opioid receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်ခဲ့ကြအီး  ။ မကြာသေးမီက Walker က et al အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွင်းκ-opioid အဲဒီ receptor ရန်, မ-binaltorphimine, ရွေးချယ် [မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်38] ။ Kappa opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏လမ်းဆုံမှာသုတေသန၏အဓိကအကျိုးစီးပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး Kappa opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီး  ။ ဗဟို CeA အဆိုပါ latero-capsular (CeL / CEC) သို့ခွဲခြားနှင့် posterior ventral medial နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ CeL / CEC ၏ GABAergic အာရုံခံအဆိုပါ VTA ထံမှ dopaminergic innervations ခံယူ; ယခင်ကမှတ်ချက်ချအဖြစ်စူးရှသောအီသနောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြပွဲစဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကိုဖေါ်ပြခြင်းΔFosBကြွက်တိုးလာပြီးနောက်ဤအာရုံခံ activated နေကြသည်။ ဒါ့အပြင် [Mc တွေ့မြင်သတို့သမီး (2002]) CeA တခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အရက်၏ဆိုးကျိုးများများအတွက်  ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကို (အနိမျ့ပြင်းအားအုပ်စုကို) နဲ့ BxN ကြွက်တွေဟာ CEC အတွက်တိုးမြှင့်အာရုံခံ plasticity ပြ / လျှော့အရက် preference ကို (High ပြင်းအားအုပ်စုကို) ပြပွဲနှင့်အတူ CeL နှင့် La နှင့် BxN ကြွက်တွေဟာ CeMPV အတွက်အာရုံခံ plasticity တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်တိကျသောအီသနောအတှေ့အကွုံပု amygdala အတွက် GABAergic အာရုံခံအတွက် plasticity ပါဝငျကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီဒေတာကိုနှင့်တကွ, VTA နှင့် EW အတွက်အာရုံခံ plasticity အတွက်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူကျနော်တို့ကဒီ circuit ကိုထောကျအရက် preference ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်သိသာ plasticity ခြင်းကိုသည်းခံတင်ပြသည်။
ယခင်သုတေသန [C57BL / 6J ကြွက်နှစ်ခုပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်ခြင်းဖြင့်သွေးအရက်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်နိုငျသညျ, သို့သျောလညျးဤအသောအသွေးအရက်အဆင့်ဆင့်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြသည်မဟုတ်နှင့်မကြာခဏသောက်သုံးမြည်နှင့် Gentry (1984) ကထွက် set pharmacological လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်မကိုက်ညီကြောင်းပြသထားပါတယ်41,42] ။ လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုပြ BxN ကြွက်ပုံမှန် C57BL / 6J mouse ကိုအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုထက်လျော့နည်းစားသုံး  ။ ကျွန်တော်အသွေးသည်အရက်နမူနာယူခဲ့ပါဘူးပေမယ့်ထိုကွောငျ့, ဒါကြောင့်လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုမြင့်မားသောအသွေးအရက်ပြင်းအားအကြံပြုခြင်း, ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် pharmacologically သက်ဆိုင်ရာတို့၏အသွေးအရက်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ဖေါ်ပြခြင်း BxN ကြွက်သည်ဤဦးနှောက်ဒေသများအပေါ် plasticity သွေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးမြင့်မားသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုလည်း BxF ဦးနှောက်ဒေသများများအတွက် (မျိုးစုံကိုနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့) Post-hoc ရလဒ်များကိုနာတာရှည်အီသနောစားသုံးမှုသည်အောက်ပါတစ်ခုခုဒေသများအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုညွှန်ပြခဲ့ပါဘူးသော်လည်း, BxF ရှိသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဤမတူညီသောအချိန်ဇယားနှင့်အတူ။
hierarchical Cluster ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ် variable တွေကိုအကြားအလားအလာဆက်ဆံရေးမြင်ယောင်နိုင်ရန်အတွက်။ ရလဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ heatmap မသက်ဆိုင် genotype ၏ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်အီသနောစားသုံးမှုအကြားအထွေထွေလမ်းကြောင်းသစ်ပြသထားတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောΔFosBအဆင့်ဆင့်မြင့်သောသောက်သုံးရေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှင့်အနိမ့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဆက်စပ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, သို့သော်ဆက်ဆံရေး၏ခွန်အားတိကျစွာတစ်ခုတည်းကိုသာΔFosBအဆင့်ဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးသောက်သုံး phenotypes ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကွဲပြားအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေကိုကြွက်နှစ်ခု F1 စပ်မျိုးကွဲနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်: BxF ပြပွဲအရက် preference ကိုထောကျနေစဉ် BxN အရက်၏အမြင့်ဆုံးပါဝင်မှုနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအပြီးလျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုပြသပါ။ BxF မော်ဒယ်များတည်ငြိမ်မြင့်မားစားသုံးမှု (စဉ်ဆက်မပြတ်အရက် preference ကို) နှင့် BxN မော်ဒယ်များ (လျော့ချအရက်သေစာ preference ကို) သောက်သုံးအလယ်အလတ်။ အာရုံခံ plasticity အတွက်အပြောင်းအလဲများ (ΔFosBအဆင့်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) ခဲ့ကြသည်အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအဖြစ်ဦးနှောက်ဒေသနှင့် genotype-တိကျတဲ့, နောက်ထပ်အာရုံခံ circuitry defining အီသနောစားသုံးမှုစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အခြေခံ။ ဤရလဒ်သည်အရက်စားသုံးမှုပုံစံများပြောင်းလဲမှုများအတွက်စပ်ကြွက်ရလဒ်များကိုအတွက်တဦးတည်းမိဘလိုင်း၏သောပြောင်းလဲမှုကိုပြသခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်ဦးနှောက်ကွန်ရက်များကဤကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစပ်ကြွက်များတွင်စေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, ΔFosBစကားရပ်၏ပုံစံများပြောင်းလဲမှတ်သား။
ဒီလေ့လာမှုကကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာအကြံပြုချက်များနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ protocol ကို Austin မှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ (AUP 2010-00028) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အားလုံးခွဲစိတ်ဆိုဒီယမ် pentobarbital မေ့ဆေးအောက်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်, လူအပေါင်းတို့အားထုတ်မှုဆငျးရဲဒုက်ခ minimize လုပ်ခဲ့ကြသည်။
လေ့လာရေး C1BL / 57J ကနေဆင်းသက်လာအမျိုးသမီး F6 စပ်ကြွက် intercross သုံးပြီးကောက်ယူနှင့်ဖြစ်စေ FVB / NJ သို့မဟုတ် NZB / B1NJ ကြွက် (BxF F1 နှင့် BxN F1, မိခင် strain အဖေဘက်က strain x) ခံခဲ့ရသည်။ C57BL / 6J, FVB / NJ နှင့် NZB / B1NJ မြိုးဆကျအဆိုပါ Jackson ကဓါတ်ခွဲခန်း (ဘားဆိပ်ကမ်း, ME) မှဝယ်ယူခြင်းနှင့် 7-8 ရက်သတ္တပတ်မှာ mated ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးအနွယ်သည် genotype (BxF F1, BxN F1) ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ isosexual အုပ်စုများသို့နို့ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ [ယခင်ကစုဆောင်းဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်သာအမျိုးသမီးကြွက်တွေကိုစမ်းသပ်1,5,6] ။ ကြွက်ပေးအစားအစာနှင့်ရေနှင့်အတူစံလှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ ကိုလိုနီအခန်းတစ်ခန်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းတစ် 12 ဇအလင်းအပေါ်ခဲ့ကြသည်: 12 ဇမှောင်မိုက်သံသရာ (07 မှာပေါ်ထွန်း: 00) ။
နှစ်ဦးကပုလင်းရွေးချယ်မှုအီသနော preference ကိုစမ်းသပ်
နှစ်ခုပုလင်းရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းအမျိုးသမီး BxF နှင့် BxN ကြွက်တွေမှာမိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် [1,6] ။ တစ်ဦးအီသနောဖြေရှင်းချက်၏နိဒါန်းမတိုင်မီရေပါဝင်တဲ့ sipper ပြွန်နှင့်အတူပုလင်းမှတဦးတည်းတစ်ပတ် habituating စဉ် F1 စပ်အမျိုးသမီးကြွက် (အသက် 63 ရက်) တစ်ဦးချင်းစံလှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ရေများတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအီသနောဖြေရှင်းချက်င်အခြား: လေ့ပြီးနောက်ကြွက်နှစ်ခုတူညီပုလင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ tube ရာထူးအနေအထားအကွိုကျဘို့ထိန်းချုပ်ဖို့နေ့စဉ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြသည်။ အလားအလာ spillage နှင့်ရေငွေ့ပျံများအတွက်အကောင့်စေရန်, ကြွက်မပါဘဲထိန်းချုပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာပြွန်ကနေကုန်ခမ်းပျမ်းမျှအလေးချိန်နေ့ရက်တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီသောက်တန်ဖိုးများကနေနုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကြွက်စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတိုင်း4ရက်ပေါင်းအလေးချိန်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအရည်စားသုံးမှုအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးနေ့စဉ်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အီသနောကိုလောင်ခြင်းနှင့်အီသနော preference ကို၏အရေအတွက်ချင်းစီ mouse ကိုအဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်, ဤတန်ဖိုးများကိုအီသနောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ BxF နှင့် BxN ကြွက်တွေမှာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အရက်ပြင်းအားများနှင့် abstinence ကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, 3, 35 ၏3ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 9-18% အီသနောဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်မြင့်တက်မြင့်မားစွာဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူစမ်းသပ်အုပ်စုသည် (သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့သည် နှင့် 27% အီသနော, 9% အီသနော၏နောက်ဆုံးတင်ပြချက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်) နှင့် 3% အီသနောမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်စမ်းသပ်မှု၏ကျန်ရှိသောနှင့်အတူ 9-9% အီသနောမှဝင်ရောက်ခွင့်မြင့်တက်အနိမျ့ပြင်းအားနှင့်အတူအခြားအုပ်စုတစ်စု () ။ ဤအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုပြု၏တစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲခဲ့သို့မဟုတ် abstinence သုံးခုတသီတင်းပတ်ကာလတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ပါဘူး။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်စမ်းသပ်ကြွက်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာအလားတူအခြေအနေများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရေကိုသာများထဲမှပုလင်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းငါးအုပ်စုများအသီးအသီးမျိုးစပ်ဘို့ရှိကြ၏: ရေ (ဎ = 14-16), မြင့်မားသောပြင်းအား (ဎ = 10), Abstinence ကာလ (ဎ = 20), အနိမျ့ပြင်းအား (ဎ = 10) နဲ့အမြင့်စူးစိုက်မှု, နှင့်အနိမျ့ပြင်းအား Abstinence ကာလ (ဎ = 20) နှင့်အတူ။ ပုံရည်ညွှန်းကိုးကား Figure11 အသေးစိတ်နှစ်ခုပုလင်းရွေးချယ်မှုအုပ်စုတစ်စုအချိန်ဇယားသည်။
ΔFosB Immunohistochemistry နှင့်အရေအတွက်
osFosB immunohistochemistry (IHC) ကိုကြွက်များမှ ဦး နှောက်ဒေသ ၁၆ ခုတွင်တိုင်းတာသည်။ (၇၂ ရက်) ရေ (Control) သို့မဟုတ်ရေနှင့်အရက်တို့သို့အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခြင်း [High Concentrations and Low Concentrations] ။ မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု၏အီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုအပေါ် abstinence ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်အများကြီးသာ။ ကြီးမြတ်ရှိ၏ ထို့ကြောင့် stFosB IHC တိုင်းတာမှုတွင်ပုံမှန်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သည့်ကာလကိုမတွေ့ရပါ။ နောက်ထပ်, စမ်းသပ်မှုနာတာရှည်အီသနောစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆနျးစစျဖို့အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုအပြောင်းအလဲများကို၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာနှင့်အတူတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်လျှော့ချအရက် preference ကို၏ပထမ ဦး ဆုံးအသှငျအပွငျကျော်လွန်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ ၇၃ ရက်မြောက်နေ့တွင်အရက်ကိုဖယ်ပြီးလေးနာရီမှရှစ်နာရီအကြာတွင်ကြွက်များသည်ထုံဆေး (၁၇၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဆိုဒီယမ်ပန်တာဘိုင်ဘရီတီ) နှင့် ၂၀ မီလီမီတာ ၀.၀၁ မီလီမီတာဖော့စဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဖြင့်ဆား (PBS) ဖြင့်သကြားဓာတ်ပါ ၀ င်သည်။ PBS အတွက် paraformaldehyde ။ ဦး နှောက်များကိုဖယ်ရှားပြီး ၄% ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် paraformaldehyde ကိုပြုပြင်သည်၊ ၃% agarose တွင်ထည့်သွင်းထားသည်၊ vibratome တွင် (16 um, coronal) ခွဲထားသည်။ cryoprotectant (72% sucrose, 73% ethylene glycol နှင့် 175% polyvinyl) ။ PBS တွင် pyrrolidone) ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ညအိပ်ကာ IHC အတွက်ထုတ်ယူသည်အထိ -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ အရည်ပျော်နေသောအပိုင်းများကို PBS ဖြင့်ဆေးကြော။ ၀.၃% H0.01O100 ဖြင့်ကုသသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟုတ်သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ၃% ပုံမှန်ဆိတ်သွေးရည်ကြည်တွင်တစ်နာရီထည့်သည်။ တစ်ရှူးအပိုင်းများကို ၄ ဆဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၃% ပုံမှန်ဆိတ်သွေးရည်ကြည်နှင့် FosB ကိုဆန့်ကျင်စွာဖြတ်ထုတ်သည် (SC-4, 4:4dilution, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz, CA) ။ အပိုင်းများကိုဆေးကြောသန့်စင်ပြီး biotinylated ဆိတ်ဖြင့်ယုန်ဆန့်ကျင်သော Ig (3: 50 dilution, Vector Laboratories, Burlingame, CA) တစ်နာရီကြာဆေးကြောခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနှင့် avidin-biotin ရှုပ်ထွေးသောတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ (dilution ၁: ၂၀၀၊ Elite kit-Vector Laboratories) ။ Peroxidase လှုပ်ရှားမှု 30% H ကိုင် 30% diaminobenzidine နှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်မြင်ခဲ့သည်2O2) ။ တစ်သျှူးအပိုင်း Nissl (methylene အပြာ / azure II ကိုသုံးပြီး) counterstained ခဲ့ကြသည်။ ဆလိုက်မျက်စိကန်းရေတွက်များအတွက် coded ခဲ့ကြသည်။ ΔFosB-မှာ IR အာရုံခံဟာ optical အစိတ်အပိုင်းနည်းလမ်းနှင့် StereoInvestigator ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီး 50X (ရေနံ) ချဲ့မှာရေတွက်ခဲ့သည်။ နမူနာ parameter သည်သတင်းအချက်အလက်: အရေတွက်ဘောင် (50um x ကို 50um x ကို 10um) quantified အားလုံးဒေသများများအတွက်တူညီရှိ၏ သို့သော်ဇယားကွက်အရွယ်အစားစုစုပေါင်းနှစ်နိုင်ငံဆဲလ်အရေအတွက်လျော့နည်း 100 ထက်မူကွဲတစ်ခုကိန်းအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ 300-0.1 တူညီမယ်လို့သေချာစေရန်အသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသအဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒေတာကိုဒေသတစ်ခုချင်းစီΔFosBအပြုသဘောအရေးပါ (အာရုံခံ၏ΔFosBအပြုသဘောအရေးပါ / နံပါတ်နံပါတ်) ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှု (SC-48, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA) တွင်အသုံးပြုသည့် FosB antibody ကို FosB တစ်ခုပြည်တွင်းရေးဒေသဆန့်ကျင်ထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့် FosB နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဒီ antibody ကို FosB နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်သူကအာရုံခံအတွက်အရက်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, အထူးသΔFosBမဟုတ်ဘဲ FosB သွေးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးကတည်းက, ဒီလေ့လာမှုမှာ quantified အဆိုပါ immunopositive အာရုံခံΔFosBအပြုသဘောအာရုံခံအဖြစ်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည်။ Perrotti et al ။ () နှစ်ခုပဋိသုံးပြီး () အရက်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်ΔFosBသော induction တိုင်းတာ: FosB နှင့်ΔFosB (SC-48 အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့တစျ) နှငျ့ရရှိနိုင်ΔFosBများအတွက်ရွေးချယ်တဦးတည်း (မစီးပွားဖြစ်) နှင့်လူအပေါင်းတို့မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကိုတွေ့ လေ့လာခဲ့သည် immunoreactivity [သူတို့ Full-အရှည် FosB များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ antibody ကို အသုံးပြု. မဆို immunoreactive အာရုံခံ detect မပြုခဲ့ကတည်းက FosB antibody ကို (SC-48), ΔFosBကြောင့် အသုံးပြု. လေ့လာတွေ့ရှိ10] ။ ထို့အပြင်ΔFosBဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောနာတာရှည်ကုသမှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးနှောက်ဒေသနှင့်ဆဲလ်-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌သွေးဆောင်ခံရဖို့လူသိများသည် [ရရှိနိုင်ပါသည်11,43,44].
အတိုကောက်နှင့် neuroanatomical အဆောက်အဦများ၏တည်နေရာ
Il - infralimbic cortex (+1.70 mm); Cg1 - cingulate cortex 1 (+ ၁.၁ မီလီမီတာ); Cg1.1 - cingulate cortex2(+ ၁.၁၀ မီလီမီတာ); NAcc core - နျူကလိယ accumbens core (+1 mm); NAcc shell - နျူကလိယ accumbens shell (+1.10 mm); LSi - နှစ် ဦး နှစ်ဖက် septum intermediate (+1.10 mm); la - lateral amygdala (-1.10 mm); Bla - basolateral amygdala (-1.10 mm); CeC / CeL - အလယ်ဗဟိုဆံနှင့်ဗဟိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက် amygdala (-1.22 mm); CeMPV - amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (-1.22 mm) ၏ medial posterioventral အဘို့ကို; PAG - periaquaductal မီးခိုးရောင် (-1.22 mm); EW - အက်ဒ်ဂါ - ဝက်စဖလ်နျူကလိယ (-1.22 မီလီမီတာ); VTA - ventral tegmental areaရိယာ (-3.64 မီလီမီတာ); DR - dorsal raphe (- ၄.၆၀ မီလီမီတာ)၊ PBN - parabrachial နျူကလိယ (-3.64 မီလီမီတာ); NTS - နျူကလိယ tractus solitarius (-3.64 mm) ။ Stereotaxic Coordinates အတွက်ကြွက်ဦးနှောက် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကိုဦးနှောက်ဒေသ၏အရေအတွက်ဘို့တမှသုံးကဏ္ဍများကိုက်ညီစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒေတာများကိုမဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ချဘယ်မှာ မှလွဲ. SEM ±ယုတ်အဖြစ်အစီရင်ခံရသည်။ ဒေတာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းများ Statistica ဗားရှင်း6(StatSoft, Tulsa, OK ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် GraphPad Prism ကိုဗားရှင်း 4.00 (GraphPad Software များ, San Diego မှ,, CA, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံ Two-လမ်း ANOVAs အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ဖို့အီသနောစားသုံးမှုနှင့် preference ကိုဒေတာအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ နှစျခုနဲ့သုံးလမ်း ANOVAs interaction ကနှင့်အုပ်စုသည် (အမြင့်စူးစိုက်မှု, အနိမျ့စူးစိုက်မှု, နှင့်ရေ), ဦးနှောက်ဒေသနှင့် genotype များအတွက်အဓိကသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ΔFosBဒေတာအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ လာသောအခါသင့်လျော်သောမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Bonferroni ရဲ့ Post-hoc များအတွက် Bonferroni ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ် circuitry လျှော့ချအရက်သေစာ preference ကိုဖေါ်ပြခြင်းကြွက်တွေမှာ FosB တိုးလာကြပါပြီမယ်လို့တွေးဆ။ အသီးအသီးမျိုးစပ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အဘို့, Pearson ရဲ့ r ကိုΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်အီသနော-ကြုံတွေ့ကြွက်တွေမှာအီသနော preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
hierarchical Cluster ဒေတာ Co-ကွဲပြားပုံကိုမြင်ယောင်နှင့်အတူတကွဘယ်လိုဒေတာအဖွဲ့ကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများအချက်အလက်များ၏ 15% ထက်မကျော်လွန်ခဲ့ပါဘူးထားတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုΔFosBဒေတာ, အစားထိုး။ အဆိုပါရှိသည်ဟုမှတ်စရာတန်ဖိုးများကိုအမှန်တကယ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလျှင်ထက်မသေချာမရေရာ၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့လည်းမရှိပေမယ့်, hierarchical Cluster ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိစ္စတွင်ပညာရှိနှိုင်းယှဉ်ဘို့အပြည့်စုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သို့မဟုတ်ပြည့်စုံကိုပယ်ဖျက်လိုအပ်သည်။ hierarchical Cluster ရပ်ကွက်ရဲ့နည်းလမ်းသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်နှင့်ရရှိလာတဲ့ပြွတ်တစ်ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (JMP®, ဗားရှင်း 8, SAS Institute မှ Inc ကို, cari, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား) ၏ပထမဦးဆုံးနိယာမအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ရေနှင့်အီသနော-အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများအဘို့, အသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ΔFosBဒေတာ z-ရမှတ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်နှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြွတ်၏နံပါတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာပြီးတော့ကြီးကြပ် hierarchical Cluster ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဦးနှောက်ဒေသများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ပြွတ်ခဲ့သည်။
ARO, YAB, RAH, Taj လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ARO ဒေတာရရှိခဲ့သည်။ ARO, အိုင်ပီ, RDM ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ARO, RDM, အိုင်ပီ, Taj, YAB နှင့် RAH လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဆွဲရေးနှင့်ထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်ပါနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ DRs ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဂျိုဒီ Mayfield နှင့် Colleen McClung နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဆွေးနွေးမှုများနှင့် Marni Martinez, ဂျနီဖာရမှာပါ, Michelle Foshat, ဟိုဆေး Cienfuegos, ဂျေမီ Seymour နှင့် Darshan Pandya သည်။ ဤသည်သုတေသနပြုအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်ထောက်ပံ့ရေး AA13520-S နှင့် AA06399 အပေါ်အရက် Consortium Grant က AA16424 နှင့်အမျိုးသားအင်စတီကျုအပေါ်သမာဓိအာရုံကြောသိပ္ပံ Initiative ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Garcia က-Andrade ကို C, အမှတ်တရ TL, Ehlers CL ။ အဆိုပါ firewater ဒဏ္ဍာရီနှင့်မစ်ရှင်အိန္ဒိယလူမျိုးအတွက်အရက်တုန့်ပြန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;154: 983-988 ။ [PubMed]
Schuckit MA, Smith က TL, အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အရက်တုန့်ပြန်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. လူမျိုးကွဲဖြတ်ပြီး Kalmijn ဂျေတွေ့ရှိချက်: အမျိုးသမီးများနှင့်လက်တင်နွယ်ဖွားတစ်ဦးကောလိပ်ကျောင်းလူဦးရေ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004;10: 1499-1508 ။ [PubMed]
Belknap JK, Crabbe JC, Young က ER ။ 15 inbred mouse ကိုဗီဇထဲမှာအီသနော၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှု။ Psychopharmacology ။ 1993;112: 503-510 ။ Doi: 10.1007 / BF02244901 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blednov YA, Metten P ကို, ဖင်လန် DA, Rhodes JS, Bergeson SE, Harris က RA, Crabbe JC ။ Hybrid ကို C57BL / 6J FVB / NJ ကြွက် C57BL / 6J ကြွက်ပြုပါထက်ပိုပြီးအရက်မသောက်ရ x ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29:1949–1958. doi: 10.1097/01.alc.0000187605.91468.17. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blednov YA, Ozburn AR, Walker က D:, Ahmed က S နဲ့, Belknap JK ။ et al ။ မြင့်မားသောအရက်သုံးစွဲမှု၏မျိုးဗီဇမော်ဒယ်များအဖြစ် Hybrid ကိုကြွက်။ ပြုမူနေမျိုးရိုးဗီဇ။ 2010;40:93–110. doi: 10.1007/s10519-009-9298-4. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ozburn AR, Harris က RA, Blednov YA ။ C57BL / 6JxFVB / NJ နှင့် C57BL / 6JxNZB / B1NJ F1 စပ်ကြွက်အကြားအပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှု: အီသနောစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှုစပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေမျိုးရိုးဗီဇ။ 2010;40:551–563. doi: 10.1007/s10519-010-9357-x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Melendez RI က, Middaugh ld, Kalivas PW ။ C57BL / 6J အတွက်အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2006;30:2017–2025. doi: 10.1111/j.1530-0277.2006.00248.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Porrino LJ, Whitlow မှန် CT, ရှံဆုန်နာရီ။ အီသနောနှင့်ကြွက်များတွင်ဒေသခံနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ၏နှုန်းထားများအပေါ်အီသနော / sucrose ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998;791(1-2): 18-26 ။ [PubMed]
Williams က-Hemby L ကို, Porrino LJ ။ အီသနောဒနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်ဆေးများကြွက်များတွင်နှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကွဲပြားပုံစံများထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1994;18(4):982–988. doi: 10.1111/j.1530-0277.1994.tb00070.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က, Elmore RG, Knapp DJ သမား, Selley DE, မာတင် BR, Sim-Selley L ကို, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008;62(5):358–369. doi: 10.1002/syn.20500. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Perrotti LI, Bolaños, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့, Ulery PG, Wallace DL, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ, Barrot အမ် DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005;21:2817–2824. doi: 10.1111/j.1460-9568.2005.04110.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ryabinin AE, ဝမ် YM ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအရက်အုပ်ချုပ်ရေး differential DBA / 2J ကြွက်တွေမှာက c-Fos နှင့် FosB ပရိုတိန်း immunoreactivity သက်ရောက်သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22:1646–1654. doi: 10.1111/j.1530-0277.1998.tb03962.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ryabinin AE, Bachtell RK, Freeman က: P, မြင့်တက် fo ။ အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူစဉ်က mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် ITF စကားရပ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001;890:192–195. doi: 10.1016/S0006-8993(00)03251-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bachtell RK, ဝမ် YM, Freeman က: P, မြင့်တက် fo, Ryabinin AE ။ အရက်သောက်သုံးသွေးဆောင်ကူးယူအချက်များ၏စကားရပ်များတွင်ဦးနှောက်ဒေသ-ရွေးချယ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;847(2):157–165. doi: 10.1016/S0006-8993(99)02019-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရာမူးယစ်သွေးဆောင် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါဘူးအရေးကြီးသောရှိပါသလဲ နတ် neuroscience ။ 2005;8:1440–1441. doi: 10.1038/nn1105-1440. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သင်္ဘောသားအရက်ထဲမှာ neurodegeneration နှင့်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏ FT, နစ်ဆင် K. ယန္တရားများ။ အရက်။ 2009;44: 115-127 ။ Doi: 10.1093 / alcalc / agn079 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Khisti RT ကို, Wolstenholme J ကို, Shelton ဟာ KL, မိုင် MF ။ C57BL /6ကြွက်၏ substrains အတွက်အီသနော-ဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အရက်။ 2006;40: 119-126 ။ Doi: 10.1016 / j.alcohol.2006.12.003 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weitemier AZ, Tsivkovskaia NO, Ryabinin AE ။ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် Urocortin 1 ဖြန့်ဖြူး strain-မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2005;132: 729-740 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2004.12.047 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ryabinin AE ။ C57BL / 6J ကြွက်များတွင် Edinger-Westphal နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်အီသနော-သွေးဆောင် hypothermia နှင့်အီသနောစားသုံးမှုနှောင့်အယှက်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004;20:1613–1623. doi: 10.1111/j.1460-9568.2004.03594.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ryabinin AE, Yoneyama N ကို, Tanchuck MA, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, ဖင်လန် DA ။ မောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum သို့ Urocortin 1 microinjection အရက်သောက်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ neuroscience ။ 2008;151: 780-790 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2007.11.014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Turek, VF, Tsivkovskaia NO, Hyytia P ကို, Hard S က, Le အေဒီ, Ryabinin AE ။ ရွေးချယ်အရက်သေစာသောက်သုံးအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့အရပ်ကြီးကြွက်လိုင်းများငါးခုအားလုံးအတွက် Urocortin 1 စကားရပ်။ Psychopharmacology ။ 2005;181:511–517. doi: 10.1007/s00213-005-0011-x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ryabinin AE, Weitemier AZ ။ အဆိုပါ urocortin 1 neurocircuit: အီသနော-sensitivity ကိုနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအတွက်အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2006;52: 368-380 ။ Doi: 10.1016 / j.brainresrev.2006.04.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှံဆုန်နာရီ, Tolliver GA, Haraguchi M က, Hodge CW ။ အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး: mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992;654:242–253. doi: 10.1111/j.1749-6632.1992.tb25971.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McBride WJ လီ TK ။ အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: ကြွက်များတွင်မြင့်မားသောအရက်-အရက်သောက်အပြုအမူ၏ neurobiology ။ Crit ဗြာ Neurobiol ။ 1998;12:339–369. doi: 10.1615/CritRevNeurobiol.v12.i4.40. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Roberts သည် AJ, Schulteis, G, Parsons LH, Heyser CJ, Hyytiä P ကို, Merlo-Pich အီး, အီသနောဆုလာဘ်များနှင့်မှီခိုအတွက် Weiss အက်ဖ် Neurocircuitry ပစ်မှတ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998;22:3–9. doi: 10.1111/j.1530-0277.1998.tb03611.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rodd ZA, Melendez RI က, ဘဲလ် RL, Kuc Ka, Zhang က Y ကို, Murphy က JM, McBride WJ ။ dopamine အာရုံခံ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား: အထီး Wistar ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအီသနော၏ Intracranial Self-အုပ်ချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2004;24:1050–1057. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1319-03.2004. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အီသနော၏ Gessa GL, Muntoni က F, collu M က, Vargiu L ကို, Mereu G. အနိမ့်ဆေးများဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1985;348:201–203. doi: 10.1016/0006-8993(85)90381-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brody က MS, Shefner လုပ် SA, Dunwiddie တီဗီ။ အီသနောစသည်တို့အတွက်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopamine အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990;508:65–69. doi: 10.1016/0006-8993(90)91118-Z. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heilig M က, Koob gf ။ အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007;30(8):399–406. doi: 10.1016/j.tins.2007.06.006. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dyr W က, အ amygdala ကြွက်များတွင်အရက်သေစာသောက်သုံးအပေါ် 5-HT3 အဲဒီ receptor ရန်၏ inhibitory ဆိုးကျိုးများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း Kostowski ဒဗလျူအထောက်အထား။ အရက်။ 1995;12:387–391. doi: 10.1016/0741-8329(95)00023-K. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gilpin ဘရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်အားဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးအပေါ် CRF1-receptor နှင့် opioid-receptor ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32:1535–1542. doi: 10.1111/j.1530-0277.2008.00745.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hyytiä P ကို, Koob gf ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1995;283:151–159. doi: 10.1016/0014-2999(95)00314-B. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Tallent MK, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနောကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အာရုံခံအတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံးမှာ GABAergic ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ။ 2003;100: 2053-2058 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0437926100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ် AJ, Cole ကို M က, Koob gf ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdala muscimol မှီခိုကြွက်များတွင်အော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996;20:1289–1298. doi: 10.1111/j.1530-0277.1996.tb01125.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Moller ကို C, Wiklund L ကို, Sommer W က, Thorsell တစ်ဦးက, Heilig အမ်အလယ်ပိုင်းပေမယ် basolateral မဟုတ် amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကြွက်များတွင်စမ်းသပ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997;760:94–101. doi: 10.1016/S0006-8993(97)00308-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wee က S, Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် dynorphin-Kappa opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 2010;210:121–135. doi: 10.1007/s00213-010-1825-8. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Walker က BM, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, McLaughlin JP, Bakalkin G. အအရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုဆက်ဆံဖို့ dynorphin / Kappa opioid အဲဒီ receptor စနစ်များ Targeting ။ အရက်။ 2012;46: 359-370 ။ Doi: 10.1016 / j.alcohol.2011.10.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sperling RE, Gomes သည် SM, Sypek EI, ကယ်ရီ AN, McLaughlin JP ။ အီသနော-conditioning ရာအရပျ preference ကိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အလားအလာ Endogenous Kappa-opioid ဖျန်ဖြေခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2010;210:199–209. doi: 10.1007/s00213-010-1844-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McBride WJ ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ကြွက်များတွင်အရက်နှင့်အရက်-အရက်သောက်အပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဗဟိုနျူကလိယ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;71:509–515. doi: 10.1016/S0091-3057(01)00680-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မြည် VP, Gentry RT ကို။ မော်ဒယ်အတွက်စကေးအချက်များ: ကြွက်များတွင်အရက်တစ်ခု analogue ဆီသို့။ proc Natl Acad သိပ္ပံ။ 1984;81: 3543-3546 ။ Doi: 10.1073 / pnas.81.11.3543 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မြည် VP, Gentry RT ကို။ pharmacologically လှုံ့ဆော်မှုအရက်သောက်၏အသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်လိုအပ်ချက်: ကြွက်များတွင်အရက်တစ်ခု analogue ဆီသို့။ proc Natl Acad သိပ္ပံ။ 1985;82: 3469-3471 ။ Doi: 10.1073 / pnas.82.10.3469 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူး neurobiology ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2001;10: 201-217 ။ Doi: 10.1080 / 105504901750532094 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ, Kelz ကို MB, Chen ကဂျေ DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးမော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;835:10–17. doi: 10.1016/S0006-8993(98)01191-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Franklin KJ, Paxinos G. အ stereotaxic သြဒီနိတ်အတွက် mouse ကိုဦးနှောက်။2။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာ; 2001 ။